By Htet Wai Aung - January 20, 2017
ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ စသုံးတဲ့အချိန် က 2006 ခုနှစ် ၁၀တန်းပြီးစအချိန်.
ငယ်ငယ်တည်းက ကွန်ပျူတာကို အရမ်းရူးသွပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် အိမ်က မဝယ်ပေးခဲ့ဘူး.
နယ်မြို့ဖြစ်တာလည်း ပါတာကြောင့်မို့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ သိပ်ခေတ်မစားလှဘူး.
Mirc ခေတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ သူလည်း myanglish လိုပြော ကိုယ်လည်း myanglish လိုပြော။
နောက်တော့ နည်းနည်းသိလာတော့ Gtalk ဆိုတာသုံးနေပြီ။
အဲဒီတုန်းလောက်မှ မြန်မာ လို ရေးထားတဲ့ website နည်းနည်းပါးပါးစတွေ့တယ်
ကွန်ပျူတာမှ မြန်မာ အသံထွက်နဲ့ပေါင်းလာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေခေတ်စားပြီးနောက်ပိုင်း.
အင်တာနက်ထဲမှာ မြန်မာလို မြင်ဖို့ရိုက်ဖို့သုံးတဲ့ software လေးတွေကြိုကြား ကြိုကြားပေါ်လာတယ်။.
အဲဒီထဲတုန်းက သိခဲ့တာက ကွန်ပျူတာထဲမှာ မြန်မာလိုမြင်ရဖို့ alpha zawgyi ဆိုတဲ့ software လေးသွင်းရမယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးမှာကျောင်းစတက် အင်တာနက်ဆိုင်တွေပတ်သွားပြီး
မြန်မာလို မမြင်ရတဲ့ ကွန်ပျူတာထဲ မှာ ကိုယ့်ဘာသာ alpha zawgyi လေးသွင်းပြီး ဖတ်တယ်
thumbdrive လေးထဲမှာ မြန်မာ dictionary တွေ . နဲ့ အဲဒီ myanmar စာ software လေးတော့အမြဲဆောင်ထားတယ်
အဲဒီ alpha zawgyi နဲ့အမြဲချီတက်နေတုန်း. ယူနီကုတ်ဆိုတာတွေ ကြားဖူးတယ်
ကြားဖူးနားဝရှိတာတွေက ပိတောက်တို့ ဧရာတို့.. မြန်မာ၃ တို့
တရုတ်စာရိုက်သလို.. မျိုး.အသံထွက်နဲ့လည်းရတယ်. ။ တစ်ခုရိုက်ရင် အသံထွက်တူ စကားလုံးတွေထဲက တစ်ခုကို ပြန်ရွေးရတာမျိုး.။
၂၀၁၀ခုနှစ်လောက်... မိုဘိုင်းတွေ အရင်ထက်ခေတ်စားလာပြီ
၂၀၀၇ ကနေ၂၀၁၀ နှစ်စလောက်အထိ nokia keypad ဖုန်းလေးပဲကိုင်တာ ဆိုတော့.
အင်တာနက်ဂျာနယ် နည်းပညာဂျာနယ်ဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူကတော့ ဘယ်ဖုန်းအတွက် မြန်မာစာစနစ်ကိုတီထွင်လိုက်ပြီဆိုတာမျိုးတွေမြင်ရင်..
trial ရတာလေးတွေ စမ်းသုံးကြည့်ရင်း ကီးပတ်ဖုန်းလေးထဲမှာ မြန်မာလိုတစ်လုံးစနှစ်လုံးစ လေးမြင်ရတာကို ပျော်နေတာ။
နောက်တော့ nokia symbian ဖုန်းတွေခေတ်စားတယ်.
Touch screen တွေပေါ့ .အဲဒီမှာတင် အိုင်ဖုန်းလည်း ထွက်လာတစ်နှစ်လောက်ရှိလို့
သူတို့ဖုန်းတွေထဲမှာ မြန်မာစာတွေ .မြန်မာလို message ပို့တာတွေရနေတာမြင်တော့.
Symbian ဖုန်းမှာကော မရဘူးလားဆိုပြီးတော့လျှောက်စမ်းကြတာ. .သူငယ်ချင်းက nokia site ကနေ ဖုန်းအတွက် certificate တော်ငးပေးတယ်။
အဲဒါက အခုခေတ် root လုပ်သလို jail brake လုပ်သလိုပဲ။
အရင်က မြန်မာလို လုံးဝမရတဲ့ ဖိုင်တွေ က ပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်
အခု new anycall က စိုင်းညီက .. myanmar keyboard ကိုnokiaအတွက်လုပ်လို့ရတယ်ပြောလို့.
သူ့ကိုပေးပြီးစမ်းကြည့်ပေမယ့်. ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကျတော့ သုံးမရပြန်ဘူး။
တစ်ခုတော့ရှိတာ အဲဒီအချိန်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ စံပြဆိုတဲ့မြန်မာစာစနစ်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့မြန်မာစာလုံးတွေကျတော့ symbian ဖုန်းထဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်တယ်။
သူက ကျွန်တော်လို့ရိုက် ရင် . က ျွန်အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ စကားစုက သတ်သတ်ရှိပြီးသား.. စာလုံးအတွဲလိုက်ဆိုတော့.. ရှေ့နောက်မလွဲပဲ ဖုန်းထဲမှာပေါ်တာပေါ့.
ကျွန်တော်တောင်ထင်မိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက နောက်ဆိုရင် စံပြများ ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေကို လွှမ်းမိုးတော့လေမလားပေါ့ (ယခုHTC ဖုန်းတွေမှာသုံးနေသော ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်)
၅သိန်းတန်တွေလည်းပေါ်လာလို့ android စခေတ်စားလာပြီ
Android ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာလိုမြင်ရ .. message ပို့လို့ရ ရိုက်လို့ရတာ တွေမြင်. .ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ဖွင့်သုံးလို့ရတာတွေမြင်တော့. ခေတ်အသစ်ကို ပြောင်းချင်ပြီပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် ။ အခြေအနေအရ Nokia Symbianဖုန်းကို ပဲ 2011 နှစ်ကုန်အထိ ကိုင်ခဲ့ရတယ်
2011 ဒီဇင်ဘာမှ ပထမဆုံး Android Galaxy s2 ကို ဝယ်ခဲ့တယ်။
ကိုင်ခဲ့သမျှဖုန်းတွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး၊ သဘောအကျဆုံးပေါ့။
သူနဲ့တွဲပြီး နည်းပညာနယ်ပယ်အစုံလျှောက် သွားဖူးတယ်။
အဲဒီအချိန်အထိ ယူနီကုတ် က ပျောက်လက်စရှိသေး..
GSM ,WCDMA,CDMA ဖုန်းတွေ တော်တော်များများ အင်တာနက်ရကြလို့.. ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုယ် အင်တာနက်ကြည့်ကြပြီ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကြီးလည်း. .အရှိန်ရနေပြီ။Fb ကို
ပီပီပြင်ပြင်စသုံးခဲ့တာ ၂၀၁၀ လောက်တည်းက။
၂၀၁၂ မှာ Myanmar Mobile Users Club ဆိုတဲ့ ပထမဆုံးသော မိုဘိုင်းနည်းပညာအဖွဲ့ facebook မှာပေါ်လာတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ခင်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိတာနဲ့ ရောက်သွားခဲ့တာ ကနေ. နောက်ပိုင်းမြန်မာစာ မရတဲ့ဖုန်းတွေကို ရအောင် ကူညီဖြေရှင်းပေးရင်းနဲ့ တော်တော်အရှိန်ရခဲ့တယ။်
ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်စိုက်ပြီး အင်တာနက်ဖိုးအကုန်ခံပြီး .. ကူညီခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဖောင့် က ဇော်ဂျီတွေပေါ့
ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုတ် ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးခဲ့ဘူး
အဲဒီနောက် နည်းပညာ Group တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာတယ်။
MMUC က အရှိန်လျော့သွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း. ကျော်ငးပြီးလို့အလုပ်သင်ဆင်းနေချိန် ၊ ဆေးရုံမှာ လူနာအားတဲ့အချိန် ဖုန်းနဲ့
အင်တာနက်သုံးရင်း Group ထဲမှာ မေးတဲ့ သူတွေကိုကူဖြေပေးတဲ့အချိန် တွေ ကုန်သွားခဲ့တယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဘွဲ့ရလို့.. ကိုယ်နေထိုင်ရာမွေးရပ်မြေမြို့လေးကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
အိမ်မှာ အလုပ် ကမရှိတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲမှာ ပဲ ကူညီ ရင်း၊
လေ့လာရင်းနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေက တော့ ယူနီကုတ် အကြောင်း
စတင်အသုံးပြုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် . စာရိုက်ရခက်ခဲတာ
ဒါပေမယ့် Facebook ကနေ မြန်မာလို ဘာသာပြန်နေပြီဆိုတာသိခဲ့ရချိန်မှာတော့ စိတ်ဝင်စားလို့သွားလေ့လာတဲ့အခါ
သူတို့က ယူနီကုတ် စနစ်ကိုပဲအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ ။
ယူနီကုတ် နဲ့ Facebook ကို ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတကာကဘာသာစကားတွေ ဖုန်းထဲမြင်ရသုံးရချိန် ဘာလို့ ငါတို့က မရတာလည်း လို့တွေးမိတယ်။
Android version 4.1.2 မှာယူနီကုတ်ရပြီဆိုလို့ စမ်းကြည့်တယ်။
၂၀၁၂ ကတည်းက သိခဲ့တဲ့ android application လုပ်တဲ့website တွေကို အသုံးပြုပြီး android application လေးတွေလည်း စဖန်တီးနေပြီ။
အဲဒီထဲက တစ်ခုက အခုဆိုရင် ပိုအဆင့်မြင့်လို့ font ပါ embed လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့.
ယူနီကုတ် စာလုံးကို application ထဲ embed လုပ်ပြီး. galaxy s2 4.1.2 မှာဖတ်ကြည့်တယ်
အဆင့်ဆင့် ပြန်ပြီးMODIFY လုပ်ရင်းကနေ ပုံပြောင်းလာပြီ
ANDROID VERSION 4.0 ICE CREAM SANDWICH မှာ တုန်းက စာလုံးနည်းနည်းလွဲတာကနေ
အခု 4.1.X JELLY BEAN မှာ တော်တော်လွဲသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ..၂၀၁၃ နှစ်ကုန်လောက်မှာ အဲဒီလိုလွဲတာတွေကို ပြင်ပေးမယ့် DEVELOPER တွေပေါ်လာတယ်
APPLICATIONတစ်ခုဖုန်းထဲ သွင်းလိုက်တာနဲ့ မြန်မာစာအားလုံးပြန်မှန်သွားတယ်
မူလ အကောင်းကြီးကနေ အဆင့်မြှင့်လိုက် တဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့မြန်မာစာ မမှန်တော့လဲမတွေးမိဘူး။
အဲဒီနောက်တော့ HUAWEI ဖြစ်သွားတယ်။ HUAWEI JELLY BEAN အတွက် သီးသန့်ထုတ်တဲ့ ဖောင့် CHANGER သွင်းပြီး. မြန်မာလိုဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ရတယ်
ဒါတောင်တစ်ခါတစ်လေ .. ဘာမှန်းမသိတဲ့စာလုံးတွေပေါ်လာသေးတယ်
တစ်ခါတစ်လေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားဖောင့်တွေပျောက်သွားတယ်။
အဲဒီလို အဆင့်ဆင်နဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ချိန်မှာပဲ.. samsung ကနေ ယူနီကုတ်ကိုစမ်းသပ်နေသလို..
နောက်လာမယ့်ဖုန်းတွေမှာ ယူနီကုတ် ကို အမှန်မြင်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေကြားနေရတယ်
ကျွန်တော်လည်း ယူနီကုတ်ကို ဖုန်းထဲမှာ အမှန်ဖတ်လို့ရတာမြင်မှမမြင်ဘူးသေးတာ
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူတို့ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ဖုန်း samsung s4 မှာ မြန်မာယူနီကုတ် အမှန်ဖတ်လို့ရတာကိုပြတယ်
နောက်တော့.. samsung,HTC ,HUAWEI စတာတွေ မြန်မာဈေးကွက်ထဲ ဝင်လာပြီး showroom တွေဖွင့်ကြတယ်။
Samsung ကလည်း မြန်မာစာ တစ်ခါတည်းပါတယ်
JAS ဆိုတဲ့ဖုန်းကလည်း Myanamar UI နဲ့လာတယ်
Android version kitkat 4.4 ထွက်လာပြီ။
ဒါပေမယ့် သိခဲ့ရတာက 4.2x Jelly bean version မှာတည်းက မြန်မာယူနီကုတ်က ဖုန်းတွေထဲမှာ အလုပ်စလုပ်ပြီဆိုတာပဲ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေ အကုန် ဇော်ဂျီကိုပဲ သုံးကြတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ယူနီကုတ် ကို ဖုန်းထဲမှာစမြင်ခဲ့ရတာက
4.4 kitkat ထည့်ထားတဲ့ mi4 ရောက်မှ။...
Android ထဲမှာ မြန်မာစာပိတောက်ဆိုတဲ့ ဖောင့်ပါလာပြီ။
ဖောင့်ကတော့မြင်ရပြီ။ လက်ကွက်က ဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိသေးဘူး
၂၀၁၂ လောက်ကမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ multiling ဆိုတဲ့ကီးဘုတ်ကတော့ မြန်မာယူနီကုတ်လက်ကွက်နဲ့
ယူနီကုတ် ကို ထည့်ပြီး သုံးကြည့်တယ်။ bagan,frozen pro တွေကိုယူနီကုတ် ပြောင်းသုံးပြီး ရိုက်ကြည့်တယ်
ယူနီကုတ် ရဲ့သဘောကို နားမလည်သေးတာပါမှာပေါ့လေ
microsoft ရဲ့ window 8 မှာလည်း မြန်မာစာပါပြီကြားသလို
Apple ရဲ့ mac မှာလည်းရပြီကြားတယ်
Android မှာလည်း မြန်မာစာစပါလာပြီဆိုတော့
မကြာခင် မြန်မာစာ ထည့်ရတဲ့ဒုက္ခ လွတ်တော့မယ်ဆိုတာတော့သိလိုက်တယ်။
Lollipop ဆိုတဲ့ Android version 5.0ရောက်တော့ မြန်မာစာစနစ်နဲ့ ဖုန်းတစ်ခုလံုံးကိုအသုံးပြုလို့ရသွားပြီ။
Google translate ကလည်း ယူနီကုတ်နဲ့ပဲ မြန်မာစာဘာသာပြန်လို့ရပြီဆိုတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယူနီကုတ် အသုံးပြုတဲ့ Groupထဲရောက်သွားတယ်
ဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်. ကွန်ပျူ တာ ၊ ဖုန်းတွေထဲမှာသုံးတဲ့ မြန်မာစာ က တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အဆင်မပြေတာ. ယူနီဖောင်းမဖြစ်တာတွေကြုံရဦးမှာပဲဆိုတာ သိလိုက်တယ်
လူတော်တော်များများအတွက် ကတော့ ဘာပဲသုံးရသုံးရ မြန်မာလိုဖတ်လို့ရဖို့ပဲ အရေးကြီးပေမယ့်
သူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့စာတွေ သူတို့တင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေ ဖန်တီးချက်တွေ
နှစ်ပေါင်းများစွာတည်နေအောင် ဆိုတာကြတော့.. ယခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ ဇော်ဂျီစနစ်နဲ့က
အင်တာနက်ထဲမှာသိမ်းဆည်းရာမှ မတိကျမှု စကားလုံး တစ်ခု အတူတူပဲကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်သွင်းမှုတွေက .. နောင်ပြန်ရှာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်မှာပဲ
မြန်မာစာ ဆိုရင် မြန်မာအက္ခရာပဲလို့ထင်တဲ့ကျွန်တော်က ..တိုင်းရင်းသား အက္ခရာတွေလည်း ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ရှိသင့်တာကိုမေ့နေတယ်
ကျွန်တော်တို့.. မြန်မာစာတောင် အင်တာနက်ထဲမှာ ဖတ်ချင်ရင်..သူတို့တိုင်းရင်းသားစာတွေကောဘယ်လိုဖတ်မှာလဲလို့တွေးမိတယ်
အခုယူနီကုတ် ဆိုတဲ့စနစ်မှာ တိုင်းရင်းသားစကားလုံးတွေကိုပဲ တစ်ခါတည်း တွဲဖတ်ရှူလို့ရမယ်ဆိုတော့မှ သဘောပေါက်ခဲ့တာ .. တိုင်းရင်းသားစာလုံးကလဲ မြန်မာ စာ အုပ်စုထဲမှာတစ်ခါတည်းပါသင့်တယ်လို့ပါ။
နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်နေရင်.. ဖုန်းတွေအားလုံး ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့စနစ်ကိုရောက်ရင်
နိုင်ငံခြားမှာ နောက်ဆုံး Android version နဲ့ဖုန်းတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် window 8 တင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာမှာဖတ်ရင် ဘာဖောင့်ဘာကီးဘုတ်မှသွင်းစရာမလိုပဲ ကျွန်တော် အောက်ကယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဘယ်ဖုန်းဝယ်ဝယ် မြန်မာစာထည့်ပေးပါဦးလို့ ပြောဖို့မလိုတဲ့အချိန် ရောက်ပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာ မြန်မာ စာပါပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့် လူအများစုသုံးနေတဲ့မြန်မာစာကို အချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့ရဖို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရတယ်။
ဖောင့်ပြဿနာနဲ့ပဲရှေ့မတက်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က သတ်သတ်မှတ်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ မြန်မာစာ စနစ်ရှိပြီဆိုရင်.. ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီး အများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းတိုင်း နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစနစ်တစ်ခုနဲ့ပဲ အသုံးပြုကြပါလိမ့်မယ်
ဖောင့်အလှများစွာရိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ powerpoint လို စက်တစ်ခုကတစ်ခု ကူးပြောင်းပြသဖို့လိုတဲ့ အခါတိုင်း .ဖောင့်မပါလို့ မပေါ်တာမဖြစ်ရတော့ပါဘူး။
အင်တာနက်ထဲမှာယူနီကုတ် နည်းလမ်းသုံးထားတဲ့ မြန်မာစာဖောင့်အလှများစွာကို နှစ်သက်သလိုပြောင်းလဲဖတ်ရှုနိင်ပါလိမ့်မယ်
နောက်ဆုံး. .. အင်္ဂလိပ်လိုပဲအမြဲသုံးနေရတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာလို ဖတ်ရှုရမယ့်လမ်းညွှန်တွေ ပေါ်ပြီး.. လူတန်းစားအားလုံး.. အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဝီကီပီဒီယာ ၊ Google translate စတာတွေမှာ ယူနီကုတ် အသုးံပြုပြီးစာတွေဝိုင်းရေးကြ ၊ဘာသာကူပြန်ကြလို့.. ပိုမိုပြည့်စုံတိကျတဲ့ အဖြေတွေထွက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်.။
မသိသမျှအရာအားလုံး မြန်မာ စာတစ်ခုတည်းနဲ့ ချက်ချင်းရှာဖွေပြီး တိကျတဲ့ ရလာဘ်ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ပုံနဲ့
ဘာလို့ယူနီကုတ် သုံးသင့်ကြလည်းဆိုတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်နဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Credit : ကိုငြိမ်းချမ်းကိုကို